Fanboy sy Chum Chum lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Fanboy sy Chum Chum lalao
indray ho antsika sarimiaina mpandray anjara, fanatitra mba hilalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Fanboy sy Chum Chum. Dia maika ny kamiao, miezaka hahita ny harena miafina. Amin'ny fotoana hafa dia hita nilalao tamin'ny snowballs ao amin'ny fivarotana lehibe miaraka amin'ny vata fampangatsiahana Frost. Kanefa ireo dia tsy tavela rehefa izao tontolo izao dia nandrahona ny vahiny, ary nihazakazaka nanatona hamonjy ny planeta amin'ny vahiny mpanani-bohitra. Toa mahaliana ny rehetra ary dia vonona ny hizaha toetra ny tenany na inona na inona an-tsaha. Eny, na dia teo amin'ny dihy tany! Izay tokony hatao? Araka ny fialan-tsasatra, ary tsy mipetraka tsara ao an-trano. Hevitra na oviana na oviana farany, ka dia voky ny ny hetsika, izay taorian'ny ambony mpiadidy ny amin'ny Sneezy.
Lalao Fanboy sy Chum Chum tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Fanboy sy Chum Chum lalao
Fanboy sy Chum Chum: Dollar Dance
Fanboy & Chum Chum ao amin'ny fefy mihazakazaka
Fanboy & Chum Chum amin'ny ady snowball
Fanboy & Chum Chum ptarmic sidina
Namana afa-misaraka roa manolotra hilalao lalao Fanboy sy Chum Chum-tserasera
Lalao Online Rehetra Fanboy sy Chum Chum lalao
Raha tia tantara an-tsary, izay superheroes famonjena an'izao tontolo izao avy amin'ny villains, miady vahiny sy hafa fantastical zavaboary, ny animation andian Fanboy & Chum Chum – ity no tena zava-baovao ao amin'ny orinasa tantara an-tsary. Mitantara ny tantaran'ny namana roa izay tsy mampaninona ny manana voly. Ao amin'ny fahariana, dia mamorona zava-misy izay mitranga mitovy ny hafa rehetra niainany. Sariitatra tsy ho voaresaka mahomby sy ravina ihany mampino hivadika toe-javatra iray.
Ny tantara ny roa mpanonofy
Ny andianà voalohany ny sariitatra niseho tamin'ny Aogositra 2009. Ny hevitra iray an'ny orinasa Amerikana ampy lehibe Frederator Studios, izay specializes amin'ny tantara an-tsary fohy. Ny iray amin'ireo sariitatra malaza indrindra ao amin'ny Studio dia andiana antsoina hoe « ny fiainako toy ny Tanora Robot ». Isaky ny andian-ny sariitatra Fanboy & Chum Chum maharitra ny 10-12 minitra sy marina rehefa nandidy tsara. Farany tamin'ny 2012 ny orinasa vanim-potoana roa voatifitra ny sariitatra, izay tantara ho tanteraka ny fizarana 79. Ny andian-dahatsoratra fotsiny animation mbola feno ny endri-tsoratra be dia be, fa ny tena azo antsoina hoe vitsy ihany.
Fanboy – ny tena toetra ny animation andiany. Izany no ara-dalàna zazalahy, izay niverina 11 taona. Fanboy fihobian'ny avy any Failandy, any am-pianarana. Eny ary, araka ny fianarana - manompo ny fotoana. Ambony indrindra baolina izany – roa. Tsy tia ny manonofinofy, fotsiny lohany amin'ny rahona. Mahafinaritra sy tena mahatsikaiky. Avy amin'ny akanjo efa foana ny manao ny fitoriana volomparasy-maitso.
Cham Cham – fanboev namana tsara indrindra ary ny iray hafa mpilalao fototra ity sariitatra mahatsikaiky. Izy no zandriny roa taona noho ny fisakaizana aza izy, fa mahay noho izy be. Fihobian'ny avy Cham-Cham Chalkistana. Foana mitafy akanjo ny mavo sy fotsy short. Eo imason'ny na hevitra, na akanjo mainty.
Kyle – fahavalo Cham-Cham sy fanboys. Tsy mino hoe Kyle manana hery mihoatra ny natoraly sy mahay amin'ny famakafakana lahatsoratra. Kyle nandaka avy tamin'ny anankiray amin'ireny ny sangany sekoly ny mazia, satria lasa iray tamin'ireo mpampianatra ao amin'ny vatomamy sy tsara fanahy ny nihinana. Ankoatra ny hoe Kyle tsy tia ny zava-misy fa tsy mandinika ny ody, ary mbola tsy tiany tomfoolery Cham-Cham sy fanboys. &Nbsp;
Yo – inona no atao nafana andian tsy mampihomehy ankizivavy? Ary ny sarimiaina tsy afa – amim-pifaliana tovovavy Yo ankizivavy fanboev sy Cham-Cham, izay tia ny manala azy amin'i amin'ny farany. &Nbsp;
Mr. Hank Maflin – Dia manamarika fa toetra amam-panahy. Izany no hafahafa fa mpampianatra fanboev sy ny orinasa. Hafahafa ihany koa ny fitondran-tena, hafahafa ihany koa ny zava-misy fa mandany ny alina ao an-day izay mamelabelatra aorian'ny kilasy mivantana amin'ny kilasy.
milalao Cham Fanboy Cham sy ny
Tsy misy tsy falifaly raha oharina amin'ny tena nientanentana andian sy lalao Cham Cham Fanboy sy izay miaraka potoana matetika amin'ny lalao isan-karazany fitaovana. Tamin'ny toerana dia afaka mahita vitsivitsy mampihomehy lalao amin'ny endri-tsoratra izay animation andian-dahatsoratra. Fanboy sy Chum Chum ny lalao izay tsy mitondra firaisana ara-nofo tsy misy taona na faneriterena – Mety ho voampanga tsirairay sy amim-pifaliana ny toe-po tsara ho an'ny andro manontolo, na higadrany miala sasatra amin'ny filalaovana kilalao mahafinaritra aterineto mivantana eo amin'ny tranonkala. Ny lalao dia azo maimaim-poana, ary tsy mila maka sy mametraka eo amin'ny solosaina: vao mifidy ny toerana tena lalao ary manomboka ao amin'ny toerana tena navigateur. Raha te-hilalao mahafinaritra, tsara-voatsoaka, mampientam-po lalao – dia tonga izay tianao! Fanboy sy ny vahoakany maro be dia vonona ny manonofinofy amin'ny lohahevitra rehetra aminao. Games mampiseho ny Mpandray anjara ny animation andian Fanboy & Chum Chum no nohavaozina foana, ka tsy tara ny vaovao eo amin'ny toerana niainany!